याे कुकुरकाे टाउकाेकाे मूल्य ८० लाख !
Home others याे कुकुरकाे टाउकाेकाे मूल्य ८० लाख !
दक्षिण अमेरिकी देश कोलम्बिया लागू औषध तस्करीका लागि विश्वभर कुख्यात देश हो । तर पछिल्ला दिनमा एउटा कुकुरले कोलम्बियाका धेरै तस्करहरुलाई बाँच्नै मुस्किल बनाइदिएको छ ।
सोम्ब्रा नामक उक्त कुकुरले २ वर्षमा झण्डै १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मूल्यको लागुऔषध बरामद गर्न सहयोग गरेको छ, पुलिसलाई । कुकुरका कारण निद हराम भएका लागुऔषध अपराधीहरुले कुकुरको टाउकाको मूल्य तोकेका छन् । उक्त कुकुरलाई जिउँदै वा मारेर ल्याउने मानिसलाई ८० लाख रुपैयाँ बराबरको पुरस्कार दिने घोषणा तस्करहरुले गरेका छन् ।
कोलम्बियाको पुलिसले नै यो कुकुरका विषयमा ट्विट गरेर यसको योगदानका विषयमा सुरुमा जानकारी प्रदान गरेको थियो । शेफर्ड जातको सोम्ब्रा कुकुरले पछिल्लो दुई वर्षदेखि कोलम्बियाको पुलिस विभागमा काम गर्दै आएको छ । यो कुकुरको सहयोगले पुलिसले २ सय ४५ जना लागुऔषध अपराधी पक्रिन सफल भएको छ । यसले देशका दुईवटा ठूला एयरपोर्टमा पालैपालो ड्युटी गर्ने गरेकाे छ ।
यो कुकुर बुलेटप्रुफ गाडीमा हिड्दछ । यो कुकुरको सुरक्षार्थ दुईजना बन्दुकधारी प्रहरीहरु खटिने गरेका छन् । एयरपोर्टमा पिक आवरमा ६ घण्टाका लागि यसलाई ड्युटीमा खटाइन्छ । यो कुकुरको उमेर ६ वर्षको रहेको छ । एजेन्सीकाे सहयाेगमा
Previous articleएकैपटक २७ गाईलाई सुत्केरी भत्ता
Next articleगर्भवती बाख्रामाथि सामूहिक बलात्कार !